कोक शास्त्र अनुसार कुनै केटीले तपाईंलाई मन पराएको कसरी थाहा पाउने हेर्नुहोस रोचक तथ्य? - Samachar Post Dainik
कोक शास्त्र अनुसार कुनै केटीले तपाईंलाई मन पराएको कसरी थाहा पाउने हेर्नुहोस रोचक तथ्य?
कास्कीपाटि:कुनै राम्री केटी बाटोमा हिँडिरहँदा धेरै केटाहरुको नजर पर्छ । उनीहरु केटीलाई घुरेर हेर्ने मात्र होइन, आँखा झिम्क्याउन, जिब्रो पड्काउनसम्म पछि पर्दैनन् ।
उस्तैले त ‘आई लभ यू’ नै भनिदिन्छन् ।
तर, केटीहरुको हकमा यो लागू हुँदैन । केटीहरु स्वभावैले लजालु हुने भएकाले केटाहरुलाई जिस्क्याउने त आँटै गर्दैनन् । बाटो हिँडिरहेको कुनै पुरुष मन पर्‍यो भने उनीहरु खुलेर व्यक्त गर्न सक्दैनन् ।
चोरी-चोरी हेर्छन् । त्यसैले उक्त पुरुषले थाहै पाउँदैन कि कुन केटीले उसलाई मन पराइरहेकी छिन् ।तथापि, यस्ता केही संकेतहरु छन्, जसको मद्दतले सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ कि कुनै केटीले तपाईंलाई मन पराइरहेकी त छैन ?
हाँस्नु/मुस्कुराउनु:कुनै केटीले एउटा पुरुषलाई देखेर हाँस्ने वा मुस्कुराउने गर्छिन् भने त्यसलाई सामान्य मात्रै सोच्नु हुँदैन । ती यसले पुरुषप्रति युवती विशेषरुपमा आकषिर्त छिन् भन्ने संकेत गर्छ ।
कुनै पनि केटीले कुनै पुरुषलाई देखेर संकेत दिनुपरे उनीहरु प्रायः मुस्कानलाई नै हतियार बनाउने गर्छन् । यसरी मुस्कुराउँदा सिधै तपाइर्ंलाई नहेरेर अन्यत्र हेरेजस्तो गर्छिन् । त्यसैले, अब तपाईं पनि यो कुरा याद गर्नुस ।
कर्के नजरले हेर्नु: कुनै पनि युवतीले आकर्षक पुरुष देखिन् भने सिधै घुरेर हेर्न सक्दिनन् । उनी कर्के नजरले हेर्न थाल्छिन् । र, पुरुषले देखिहालेमा नजर अन्तै घुमाउँछिन् ।
यूवतीहरु यो क्रियाकलाप बारम्बार गर्ने गर्छन् । त्यस क्रममा उनीहरु कयौपटक आँखामा आँखा जुधाउने कोशिश पनि गर्छन्, तर सक्दैनन् ।
लुकी-लुकी हेर्नु:जब कुनै युवती युवकप्रति आकषिर्क हुन्छिन्, उनी आफूले मन पराएको पुरुषलाई साथीको पछाडी बसेर लुकीलुकी हेर्ने गर्छिन् ।
ताकि उनीहरुले हेरेको तपाईंलाई नोटिस नहोस् । यसो गर्नुको एउटै मात्र कारण भनेको तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सुटुक्क थाहा पाउनु हो ।
प्रत्येक गतिविधि याद राख्नु:यदी कुनै केटी तपाईका स-साना गतिविधि पनि याद राख्छन् भने बुझ्नुस् की उनको तपाइर्ंप्रति रुची छ ।
उनले तपाईलाई साच्चिकै मन पराउँछिन् र तपाईलाई बारम्बार हेर्ने गर्छिन् । त्यति मात्र हैन, उसले तपाईको बारेमा आˆना साथीभाईलाई समेत पक्कै बताउँछिन् । जसले गर्दा तपाईलाई केटीले मात्र हैन, उनका साथीहरुले पनि नोटिस गर्न थाल्छन् ।
बोल्दा अनुहार रातो हुनु:यदि कुनै केटी तपाईंसँग बोल्दा हड्बडाउँछिन्, नर्भस हुन्छिन् भने जान्नुस उनको मनमा हलचल मच्चिइहेको छ ।
उनले तपाईंलाई मन पराइरहेकी छन् भने यस्तो हुन्छ । यस्तो बेला उनको अनुहार रातो भएको हुन्छ र उनले तपाईंसँग आँखा जुधाएर बोल्न सक्दिनन् ।
प्रकाशित मिति २ बैशाख २०७८, बिहीबार ०७:३३